‘महिनावारी’का बेला ‘सम्बन्ध’ बनाउनुको एउटा ठूलो फाइदा – Sanjal Nepal
Homeरोचक‘महिनावारी’का बेला ‘सम्बन्ध’ बनाउनुको एउटा ठूलो फाइदा
February 6, 2021 admin रोचक 4542
तर कतिपय अवस्थामा आफ्नो महिनावारीको रक्तश्रावलाई प्राकृतिक रुपमा नै चाँडै समाप्त गर्न सकिन्छ । तर यहाँ जुन तरिकाबारे जानकारी दिइएको छ ती सुरक्षित त छन् तर यसले सबैलाई शत प्रतिशत असर पुर्याउँछ भन्ने छैन । यद्यपी, इमर्जेन्सीका बेला यी तरिका अपनाउदा फाइदा नै हुन्छ ।से-क्सको क्रममा तपाईंको ग र्भाशयमा केही संकुचन हुने गर्छ । विशेषगरी तपाईं चर-मोत्कर्षमा पुगेका बेला ….
हो तपाईंले सही पढ्नुभयो । एक स्वस्थ शरिर तपाईंको शरिरका लागि मात्र राम्रो नभई यसले तपाईंको महिना-वारीको रक्त-श्राव पनि चाँडै नै रोक्छ । तपाईंलाई महिनावारीका बेला अत्यधिक पेट दुख्छ भनेपनि यसले सहयोग गर्नेछ । से-क्सको क्रममा तपाईंको ग र्भाशयमा केही संकुचन हुने गर्छ । विशेषगरी तपाईं चर-मोत्कर्षमा पुगेका बेला यस्तो हुन्छ । यी संकुचनका कारण रगत एक झट्कामा शरिरबाट बाहिर निस्कन सक्छ जसका कारण महिनावारी चाँडै नै समाप्त हुन्छ ।प्रोजेस्टेरोन एक प्रकारको हर्मोन हो जुन तपाईंको गर्भाशयमा हुन्छ । भिटामिन सीका कारण गर्भा-शयको आन्तरिक सतह चाँडै नै टुट्ने
नाकमा चि’ल्लो तथा काला वा सेता खि’ल आएर चि’न्तित हुनुभएको छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
December 9, 2020 admin रोचक 3580
April 8, 2021 admin रोचक 1089
हिन्दु धर्ममा महिलालाई सौभाग्यशाली र लक्ष्मीको रूप मानिन्छ । आज हामी महिलाहरूको बारेमा केही यस्ता रहस्य उल्लेख गर्दैछौँ, जो शायद तपाईलाई जानकारी नहुन सक्छ । महिलाहरूको हरेक अंगमा उनीहरूको कुनै न कुनै रहस्य लुकेको हुन्छ
April 2, 2021 admin रोचक 9513